ဘာနဲ့မှရောစရာမလို တစ်မျိုးတည်းနဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝပေါင်းတင်နည်းလေးတွေ | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဘာနဲ့မှရောစရာမလို တစ်မျိုးတည်းနဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝပေါင်းတင်နည်းလေးတွေ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် နဂိုအသားရေလေးကောင်းပြီးတော့ မိတ်ကပ်မပါတောင်လှနေဖို့ဆိုတဲ့အရာဆိုတာအပြောကသာလွယ်တာ တကယ်ကြတော့အရမ်းခက်ပါတယ်။ Skincare တွေဘယ်လောက်သုံးသုံးအစားအသောက်လေးကလည်းဂရုစိုက်ရသေး။ Treatment လေးတွေကလည်း ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးရတာနဲ့အိုရှုပ်နေတာပါပဲနော်။ မိန်းကလေးဖြစ်ရတာမလွယ်ကူမှန်းအခုတော့သိပြီမလား? ? ပေါင်းတင်ကြတယ်ဆိုပြီးရှိသမျှအသီးတွေအကုန်ကပ် အမှုန့်တွေကိုဖျော်လိမ်း ဆိုတာတွေကတော့မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာတော့ အရမ်းကိုရေပန်းစားပါတယ်။ အဲ့ဒီထိ မိန်းကလေးတွေက တူသေးတယ်။ ပြဿနာကစပါပြီ။ အဲ့မှာ အုပ်စုကွဲပြီ။ အပျင်းကြီးတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ မကြီးတဲ့ကောင်မလေးတွေ။ လှသွားတာကိုလည်းသိတယ်။ ပျင်းလို့ အချိန်မရှိလို့ဆိုပြီး ပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်ကြတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့လှတာတော့လှလာမယ်။ ရလဒ်ကတော့ကြာတာပေါ့နော်။ ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့ ကြည်လင်ပြီး မိတ်ကပ်မလိမ်းထားရင်တောင် တစ်မျိုးလေးလှနေမှာပါနော်။ ပေါင်းတင်တဲ့နည်းတွေကလည်းများလိုက်တာဆိုတာ။ ထိုင်ပြောရင်မိုးတောင်လင်းသွားလောက်တယ်။ သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ပေါင်းတင်တာကတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းနည်းတဲ့အပြင် ငွေကုန်ကြေးကျလည်းသက်သာပါတယ်။ ဆိုင်တွေဘာတွေမသွားရတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်တာလည်းသက်သာတာပေါ့။ မင်မင်ဆိုရင်ပေါင်းတင်ရင် ရောရတာနည်းလေပိုကြိုက်လေပဲ။ တစ်ခုတည်းဆိုပိုကြိုက်ပေါ့။ ချက်ချင်းမျက်နှာပေါ်ကောက်တင်လိုက်ရုံပဲ။ ဒီတော့မင်မင်လိုအပျင်းကြီးတဲ့ကောင်မလေးတွေများရှိမလားလို့ တစ်ခုတည်းနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ ရလဒ်ကလည်းအံ့မခမ်းဖြစ်စေမယ့် ပေါင်းတင်ပစ္စည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော်။
အထူးတစ်လည်ပြောပြနေစရာမလိုအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါနော်။ ရေဓါတ်တွေအများကြီးပါတဲ့အပြင် အခုလိုပူပြင်းနေတဲ့ရာသီဉတုနဲ့လည်းအံ့ကိုက်ပါပဲ။ ပြီးတော့ပေါင်းတင်ပြီးသွားရင်အသားလေးကကြည်ကြည်လေးနဲ့အေးအေးလေးဖြစ်သွားတာကတော့အကြိုက်ဆုံးအချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ အလုပ်လည်းမရှုပ်ဘူး။ ပါးပါးလေးတွေလှီးပြီးတော့မျက်နှာလေးပေါ်ကပ်လိုက်ရုံပဲလေ။ ဘယ်လောက်မိုက်လိုက်လဲ? တစ်ပါတ်ကို သုံးရက်လောက်ရက်ခြားစီ တစ်ခါပြုလုပ်ရင် မိနစ် ၂၀ လောက်ဆိုရင်တော့ ကြည်လင်တဲ့အသားရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီနော်။
နို့ဆီလေးသကြားလေးနဲ့ဖျော်သောက်ရင်အရမ်းကောင်းတဲ့ထောပတ်သီးကတော့ အသားရေကို အဆီဓါတ်ဖြည့်ပေးတဲ့အပြင် စိုစိုလေးဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းလိုမျိုးအသားရေတွေခြောက်တဲ့အခါမျိုးဆို ဒါလေးကတော်တော်ခရီးရောက်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးကိုခွက်အလွတ်တစ်ခုထဲမှာ ချေလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ။ မိနစ် ၂၀လောက်တင်ပြီးတာနဲ့ မျက်နှာလေးကိုရေအေးလေးနဲ့ပြန်သစ်ပေးလိုက်ရင်တော့ တကယ့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေးနဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါနော်။ ကိုယ်တွေ့နော်ဒါလေးက။
သူလေးကတော့ မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေ, အညစ်အကြေးတွေကို ပျောက်ကင်းသက်သာအောင်တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းတစ်မျိုးပါနော်။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုအနေတော်အကွင်းလေးတွေလှီးလိုက်ပြီး မျက်နှာပေါ်ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်တင်ပေးပြီးတာနဲ့ရေဆေးချလိုက်ရင်တော့ ပြောင်လက်တောက်ပနေမှာပါနော်။ သူက နှာခေါင်းထိပ်ကဆားဝက်ခြံလေးတွေကိုလည်းသက်သာစေတဲ့အပြင်ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျဉ်းစေတာမို့ တကယ့်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နော်။ တစ်ခုသတိထားရမှာလေးကတော့ မျက်နှာပေါ်မတင်ခင်မှာ လက်ပေါ်မှာအရင်စမ်းကြည့်ပါ။ တစ်ချို့ကဓါတ်မတည့်ရင်အရေပြားနီမြန်းပြီးအသားရေကိုစပ်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
တင်းတိပ်လိုအမည်းကွက်တွေကို အာလူးပြားလေးတွေပါးပါးလှီးကပ်ပေးရင်တော့ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကမ်းခြေတွေလိုမျိုးတွေက ပြန်လာကြပြီဆိုတော့ နေလောင်ထားတဲ့အသားရေတွေအတွက် ဒီနည်းလမ်းလေးက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုကပ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ အမည်းစက်ရှိတာလေးတွေကိုပဲကပ်ပေးရမှာပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ရေအေးလေးနဲ့သေချာလေးပြန်ဆေးချပေးလိုက်ရုံပါပဲနော်။
ဒါလေးကတော့အသီးအနှံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ဒိန်ချဉ်ဆိုတာကတော့အသင့်စားတဲ့ သကြားတွေထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒိန်ချဉ်အလွတ်သီးသန့်ကိုပြောတာပါ။ ရေခဲသေတ္တာလေးထဲထည့်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ခါနီးလေးကျမှ မျက်နှာလေးပေါ်တင်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူကတော့ မျက်နှာလေးကိုကြည်လင်စေပြီးတော့ ဝင်းလာစေပါတယ်။ ဘယ်လောက်လွယ်လိုက်သလဲနော်။
ကဲ ဒါလေးတွေကတော့ ဘာနဲ့မှရောစရာမလိုတဲ့ တစ်မျိုးတည်းနဲ့တင်ခရီးပေါက်တဲ့ပေါင်းတင်နည်းလေးတွေပါ။ အချိန်လည်းအများကြီးပေးစရာမလိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်နော်။ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေကြည့်နေရင်းနဲ့တောင်မျက်နှာလေးပေါ်တင်ထားပြီးလှလို့ရနေပြီနော်။ မသိဘူး တစ်အားလှလာတော့မှာ။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး နှုတ်ခမ်းနီများ
Tags: NaturalSkin CareTreatment